थाङ्का आर्टीसको रुपमा चिनिएका गायक अभिनाश घिसिङको म्यूजिकमा क्रेज (भिडियो सहित)
रुप राम्रो लालीले,जिउ हेर्दा साडीले...
न्यूज अभियान, काठमाण्डौँ। कहिले लेक बेशी त कहिले मैच्याङसंग बिताएका पल । कहिले माया प्रेम त कहिले कुलतमा फसेकाहरुको वास्वबिक बेदना ।
बिदेशमा धन कमाउन जाँदाको दुख पिडा त कहिले गाडी त जर्मनको कुरा । कल्कते काईँयो देखीे चुईँ चुईँ चुँईकने जुत्ताको नै किन नहोस । यी सबै कुरालाई गित मार्फत उतार्ने एक सफल पुरुष हुन् गायक अभिनाश घिसिङ । बिगत २० बर्षदेखि नेपाली साङ्गितिक आकाशमा उनको योगदान निरन्तर जारी छ ।
सिन्धुपाल्चोकको ठूलोपाखर हाल लिसंखुपाखर गाउँपालिकामा जन्मिएका घिसिङले कक्षा १० सम्मको औपचारिक शिक्षा ककलीङ माबि.बाट पुरा गरे । त्यसपछि उच्च शिक्षाको लागि काठमाण्डौँ आएका घिसिङले थाङ्का आर्ट गर्दै पढ्न थाले ।
थाङ्का आर्टीसको रुपमा चिनिएका घिसिङको बिस्तारै म्यूजिकमा क्रेज बढ्न थाल्यो । २०५४ सालतिर थाङ्का कोर्दै गरेका उनलाई साथी सर्कलबाटै ब्याण्डमा छिर्ने मौका पनि मिल्यो । पढ्दै काम गरेका उन्ले त्यसपछि भने पढाईलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । उनी काठमाण्डौँ छिरेको एक्काईस बर्ष भईसकेको छ ।
पढाई संगसंगै उनले काम पनि छोडेर संगितमै जिबन अर्पण गरे । सुरुमा स्थानीय ब्याण्ड योङ्ग ब्लड ब्याण्डबाट ५४ सालमा ब्याण्ड फम गरेका उनले । बिबेक राणा निराजन खडका संग मिलेर ब्याण्ड बनाएका थिए ।बिछोडको समयमा साथी सम्झी अपनाएछु,नसा जस्तो विषलाई जिवन साथी बनाएछु । लागु औषध दुब्र्यसनी सम्बन्धी गित गाएका थिए ।
कुनै समय निरन्तर एल्बम निकालिरहने अभिनाशले पछिल्लो समय भने एल्बम् निकाल्न ढिला गरिरहेका छन् । कारण हो समयको ब्यस्तता र संगसंगै आम्दानीको स्रोत प्रशस्त नहुनु । नेपालको संगित बजार सानो छ । नेपालका अधिकाँस कलाकारको जिवन बिदेशमा हुने कार्यक्रमले नै धानिरहेको छ । कलाकारले गित मात्र गाएर बाँच्ने आधार नेपालमा छैन ।
राज्यबाट कुनै किसिमको सुबिधा कलाकरहरुलाई नहुने, संगितको बजार नहुनु तथा राजनितिक अस्थिरताको मुल जडले नेपालको सबै क्षेत्र तहसनहस नै छ । यति मात्र हैन चर्चित कलकारहरु प्राय युरोपमै सेटल भईसकेका छन् ।
कारण हो देशको अस्था सन्तोषजनक छैन फलस्वरुप चलेका प्राय सबै कलाकारको रोजाई युरोप नै भईसकेको छ । यहि हो बिडम्बना किन टिकाउन सक्दैन सरकारले देशका गहनालाई ? ‘‘ल्हासाको चिसोले छोयोकी मैच्याङ्लाई‘‘,सुनको बाला,चम्पा,होनी हो ज्यानलाई मैले चिन्याको छैन र ? जस्ता गितहरु अभिनाश घिसिङलाई स्रोता तथा दर्शक माझ चिनाउन सफल गितहरु हुन् ।
कुनै समय लोकगितको मात्र बजार रहेको नेपालको सङ्गीत बजारमा पप गितले पनि राम्रै बजार पाउन सफल भएका छन् । कारण हो दर्शक तथा स्रोताको चाहाना । सधैँ एकनासको हुँदैन संगित बजार । त्यसैले जस्ले मिठो अनि फरक स्वादको ब्यञ्जन पस्किन्छ उसैले वाह वाही पाउँछ ।
अबको केहि समय पछि नै दर्शक तथा स्रोतालाई घिसिङ्ले नयाँगित उपहार ल्याउँदैछन् । रिफ्रेस रमाईलो लोक डान्सिङमा आधारित आधुनिक सुन्दरीको चाहानालाई गितमा ब्यक्त गरिएको छ । शब्द तथा संगित अभिनासकै रहेको उक्त गितमा स्वर पनि उनैलै दिएका छन् ।
रुप राम्रो लालीले,जिउ हेर्दा साडीले भन्छिन् ए हसे. हसेली... हसेली.. हलको गित उनले सार्बजनिक गर्न लागेका हुन् । रेकर्डिङको काम सकिसकेको उनको यो गित अब भिडियोको लागी तयारी अबस्थामा छ ।
भिडियो बनेपछि यो गित उनले सार्बजनिक गर्नेछन् । जिबन दौडाका क्रममा कहिले सफलता तथा असफलताबाट पाठ सिकेका अभिनाशको आगामी दिन सुखद रहोस ।
आर्यन र साम्राज्ञी स्टारर फिल्म ‘कायरा’ ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
नेहारिका र युमिनाले जितिन् 'चाईल्ड आईकन धरान'को ताज (भिडियो सहित)
तीज गीत बोल मायाले फेरी उठायो - भिडियो सहित
ऋतु बोहराको तिज गीत 'छोरीको बिलौला'सुनेर कसैको आँखाबाट आँशु नझरोस् (भिडियो सहित)
‘धन हुनेलाई मन नहुने, मन हुनेको धन’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)